Uninzi 5 HTP-eyaziwa ngokuba oxitriptan (inn) itsalwa isithombo enemithi yokukhwela ityholwana eziyinzalelwane eNtshona Afrika, ebizwa zezityalo Griffonia simplicifolia.
5-HTP okanye "hydroxy L-tryptophan" (5-Hydroxytryptophan) is a ngokwendalo-phindana acid acid kwaye siphu- kwaye esiphakathi pathways kwi biosynthesis le neurotransmitters serotonin kunye melatonin evela tryptophan. 5-HTP aguqulwa kwi serotonin neurotransmitter (5-ht), ngoncedo B6.This vitamin kwenzeka kokubini izihlunu Wayesoyika esibindini. 5-HTP iwela umqobo igazi-ingqondo (gama-5-ht akafuni). Nokongezwa ne-HTP 5 ngoko kwandisa imveliso serotonin.
inzuzo kwezempilo 5-HTP
Ngokubanzi ukunceda kutyeba (itye), PMS, uqaqanjelwa, ukudakumba, ukuxhalaba, efuna ukuziphatha enamazinga. 5 HTP kwandisa imveliso serotonin. amanqanaba serotonin luvo zibalulekile kwiinkalo ezininzi zobomi bethu bemihla ngemihla. Serotonin inoxanduva iimvakalelo yokuba kakuhle, ulwaneliseko kunye iipateni ubuthongo eqhelekileyo. Ukutyeba, PMS, uqaqanjelwa, ukudakumba, ukuxhalaba, efuna ukuziphatha enamazinga sonke ezinxulumene amaqondo aphantsi serotonin. Serotonin idlala indima ebalulekileyo ekulawuleni umsindo, ndlongo, ubushushu bomzimba, isimo, ulale, zesini kwabantu, ukutya, futhi umzimba, ngokunjalo ngokuvuselela egabha.
Kucingelwa ukuba indlela obumaxhaphetshu mihla loxinzelelo kunye nemikhwa emibi yokutya lihlisa amanqanaba serotonin emzimbeni. Yinto eyaziwayo ukuba nochuku, ndlongo, namonde, ixhala kunye ityala ixhalabisayo umzimba ukumkhulula serotonin. Le serotonin ke kufuneka agcwaliswa umzimba ukudla adle. Kodwa serotonin abuyi kufunyanwa kukuninzi kwisondlo ezininzi ngoko umzimba kufuneka yenza ngokwayo kudliwe izinto eziqulathe L-tryptophan, ezifana itshokolethi, ihabile, iibhanana, imihla ezomileyo, ubisi, iyogurt, cottage itshizi, inyama, intlanzi, Turkey , inyama yenkukhu, zesesame, iiertyisi, kunye namandongomane. Abantu abaninzi ke ngoko ingqalelo zokutya ezidweliswe (amafutha kunye carbohydrate), ingakumbi xa koxinzelelo, ibangela inzuzo ubunzima, ukudakumba, intloko ebuhlungu, kunye nobuhlungu bomzimba.
Atkins Ukutya - ukunciphisa iinkanuko
zophononongo zibonise ukuba esongeza ne-HTP 5 ivelisa iziphumo ezihle umzimba, ixhala nokudandatheka. It uphucula indlela yokulala kwaye kunciphisa iminqweno ekudleni kwabo izidlo carbohydrate ephantsi (ezifana The Atkins Ukudla). Nabani usebenzisa nenkqubo yokwehla emzimbeni efana Atkins Diet ungajongana ukuncitshiswa kwamanqanaba serotonin ngenxa yokuba carbohydrate zivuselela imveliso serotonin emzimbeni. release serotonin kubangelwa yi umthwalo ekudleni (iswekile njl) kwaye ndicinga ukuba yiloo nto sidla ukuphululwa ayidrethi phantsi koxinzelelo njengoko sifuna ukukhuthaza oku kukhululwa serotonin. Xa ingqondo uvelisa serotonin, ukungakhululeki kukho ukwehla. Kwelinye icala xa ingqondo uvelisa dopamine okanye norepinephrine (noradrenaline), sidla ukuba bacinge ze benze ngokukhawuleza kwaye ngokubanzi qwaa. Ngoko ke ukutya namandla kubonakala ukuba loo meko, lo gama iiprotheni kwandisa ahlale evule amehlo.
Ukuthatha izongezo 5-HTP enokuthintela le ukunxanela for amafutha kunye carbohydrate, kwakunye nokubonelela umzimba kunye indlela ukulawula bonke abo eminye imisebenzi zidweliswe ngasentla, ezifana nomsindo, ukutya kunye nokulala.
Nceda ne Depression kunye Anxiety
Olunye uphando oye wenziwa kwi-HTP 5 ibonisa ukuba liqaqambile ukunceda nokungonwabi kwaye mhlawumbi ixhala, one-, zokulala kunye nokutyeba. 5-HTP kubonakala ukuba neziphumo ezifanayo njengoko SSRI (okukhetha serotonin Re-ndodla Inhibitors) yokunciphisa.
amayeza kagqirha ezikhulisela amanqanaba serotonin lalathelwe onke ezi ngxaki, kodwa ke abantu abaninzi bakholelwa 5-HTP yindlela yendalo ukufeza into efanayo.
Zokuphucula ubuthongo, kucingelwa kucetyiswa ukuba uthathe-5-HTP imizuzu engama-30 ngaphambi kokuba alale, njengokuba ngaphandle ekuveliseni serotonin, 5-HTP ukwavelisa Melatonin, nto leyo hormone buthongo-nywa. Umthamo yesiqhelo siyi 50mg okanye tablet 100mg. Imiphumo yokuthatha 5-HTP enokuphathwa ngaphakathi imizuzu 10 ukuya 30.
Zama ukuthenga-5-HTP nayo oluqulathe vitamin B6, njengoko vít B6 efunekayo ukuze ukuguqulwa 5-HTP ibe serotonin.
kubonakale amathamo eziphezulu kakhulu kufuneka ukunciphisa umzimba kunye nokunciphisa uqaqanjelwa. kubonakala iidosi ukuya 900mg ngeenxa zonke ngemini ukuba ngokubanzi ingxelo.
5-HTP idla kunyanyezelwa ngcono kakhulu, lakhula zemveli. Abangaphezu kwemfuneko 5-HTP kucingelwa ukuba umzimba ize idubule, ingakumbi xa ndathabatha Vitamin B6.
Kutheni zama ezinye namhlanje uze ubone ukuba nawe ukunciphisa zakho liyanqwenela, uxinezeleko nomsindo amanqanaba, kwakunye ulale kamnandi ebusuku!